Ny Huawei Nova 2 sy Nova 2 Plus dia haseho amin'ny 26 Mey | Vaovao momba ny gadget
Ny Huawei Nova 2 sy Nova 2 Plus dia haseho amin'ny 26 Mey
Huawei dia manohy ny diany ary tsikelikely azontsika atao ny milaza fa nanao banga tamin'ireo lehibe tahaka an'io fomba io, tsy nisy maika fa tsy niato. Amin'ity tranga ity izay ananantsika no mety mampiavaka ny ilay maodely vaovao Huawei Nova 2 sy Nova 2 Plus ho fanampin'ny daty amin'ny famelabelarana izay toa manakaiky kokoa noho ny kasaina. Ireo maodely roa Huawei vaovao natolotra tao amin'ny Mobile World Congress 2017, ny Huawei P10 sy P10 Plus, dia manohy miady amin'ny avo lenta, mahazo làlana amin'ireo mpifaninana aminy ary ankehitriny misy ny tsaho momba ny maodely roa afovoany farany izay koa ataovy miresaka ny olona.
Ny Huawei Nova 2 sy Nova 2 Plus dia haseho amin'ny 26 Mey, satria azontsika vakiana amin'ny tranokala sinoa sasany, latsaky ny herintaona taorian'ny nanombohana ny kinova voalohany an'ity fitaovana ity izay hitantsika voalohany tao amin'ny IFA any Berlin . Amin'ity tranga ity dia miatrika mpifaninana iray hafa isika handray ny kaontiny eo afovoan'ny finday avo lenta ankehitriny, fa Mandra-pahatongan'ny fanolorana azy amin'ny fomba ofisialy, dia ny tsaho no resahina eto amintsika, ka ndao horaisintsika tsimoramora ity angona ity.
Ireo andinindininy izay efa tafaporitsaka rehefa avy nandalo ny fibaikoan'ny TENNA dia miresaka momba ny fitaovana iray miaraka amina processeur Qualcomm Snapdragon 660 na Kirin 660, miaraka amin'ny RAM 4 GB sy fitehirizana anatiny 64 GB. Hanampy fakantsary lehibe 12MP sy fakan-tsary 8MP eo aloha ihany koa izy io, miaraka amina capacité roa samy hafa amin'ny tranga bateria, ho 3.000 mAh ho an'ny maodely mahazatra ary 3.300 ho an'ny maodely Huawei Nova 2 Plus. Ary raha mijery ny endriny isika dia afaka mahita ny vatan'ny vy any aoriana, miaraka amin'ny sensor amin'ny dian-tànana any aoriana sy amin'ny flash LED.
Hihaino tsara ny ambin'ny tsikombakomba sy tsaho tonga amin'ny tambajotra isika amin'ny andro ho avy ary Ho hitantsika eo raha voamarina amin'ny fomba ofisialy ny datin'ny 26 Mey ho an'ny fampisehoana ireo fitaovana vaovao avy amin'ny mpanamboatra sinoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ny Huawei Nova 2 sy Nova 2 Plus dia haseho amin'ny 26 Mey
eBay, Google Maps, ary Amazon dia tsy misy intsony amin'ny Apple Watch